လူမှုရေးအရကျိန်းဝပ် cynomolgus မျောက်များအတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptor လုပ်ဆောင်ချက်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသည့်ကိုကင်း (2004) - Your Brain On Porn
လူမှုရေးအရသျော cynomolgus မျောက် Self-စီမံခန့်ခွဲကိုကင်း (1) တွင် dopamine D2 နှင့် D2004 အဲဒီ receptor function ကို၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ
Psychopharmacology (Berl) ။ 2004 ဇူလိုင်; 174 (3): 381-8 ။ EPub 2004 ဖေဖော်ဝါရီ7။
Czoty PW1, မော်ဂန်: D, Shannon EE, Gage, HD, Nader, MA.
လူမှုရာထူး cynomolgus မျောက်တွေကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ dopamine (DA): D (2) အဲဒီ receptor function ကိုများနှင့်အားနည်းချက်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများကိုကင်းအားဖြည့်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်နှင့် DA: D (1) receptors ဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးခြွင်းချက်မရှိအပြုအမူ (eyeblinking) အပေါ်တစ်ဦးက high-ထိရောက်မှု: D (1) agonist နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်ထိရောက်မှု: D (1) agonist အဖြစ်: D (2) အဲဒီ receptor အပေါ်ကိုကင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုစစ်ကြော positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကဆုံးဖြတ်သည်အဖြစ်လူမှုရေးရာထူးဖြတ်ပြီး function ကို။
အလိုအလျောက် Blink အပေါ် high-ထိရောက်မှု: D (1) agonist SKF 81297 နှင့်ကိုကင်း (0.3-3.0 / ကီလိုဂရမ် mg) ၏ဆိုးကျိုးများ 15-မိလေ့လာရေးကာလအတွင်းမှာရှစ်မျောက်တွေကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချဖို့အတွက်အနိမ့်ထိရောက်မှု: D (1) agonist SKF 38393 (0.1-17 / ကီလိုဂရမ် mg) ၏စွမ်းရည် (ဆေးထိုးနှုန်း 0.003-0.1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, IV) တစ်အောက်မှာတုံ့ပြန် 11 မျောက်တွေကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည် fixed-အချိုး 50 အချိန်ဇယား။ နောက်ဆုံးတွင် caudate နှင့် putamen အတွက်: D (2) အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့် PET သုံးပြီးဆယ်ကိုးမျောက်တွေကိုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
SKF 81297, ဒါပေမယ့်မရကိုကင်း, သိသိသာသာလွှမ်းမိုးမျောက်တွေကိုအနည်းငယ် သာ. ကြီးမြတ်အာနိသင်နှင့်အတူအားလုံးမျောက်တွေကို blinking တိုးတက်လာခဲ့သည်။ SKF 38393 ထိုး-ရသည်လူမှုရေးအဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးအလားတူအပြုအမူအာနိသင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းနှင့်အတူကင်း-ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်မှုနှုန်းလျော့နည်းသွားသည်။ တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းပြီးနောက်, D ကို (2) အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်လူမှုရေးရာထူးတလွှားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ဤရလဒ်သည်: D (1) အဲဒီ receptor function ကိုသိသိသာသာကောင်းမွန်စွာထူထောင်လူမှုရေးအုပ်စုများကနေမျောက်အတွက်လူမှုရေးရာထူးကလွှမ်းမိုးမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အစောပိုင်းကလေ့လာမှုကြီးစိုးမျောက်ပိုမိုမြင့်မား D ကို (2) အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကနဦးထိတွေ့မှုကာလအတွင်းကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ရေရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းထိုကဲ့သို့သော: D ကြောင်း: D (2) အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းညွှန်ပြကြောင်းပြသနေစဉ် (2) အဲဒီ receptor function ကိုနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်သည့်လူမှုရေးရာထူးအကြားကွဲပြားခြားနားသောကြဘူး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုကင်းထိတွေ့ DA အဲဒီ receptor function ကိုအပေါ်လူမှုရေးအိမ်ယာ၏သက်ရောက်မှု attenuated ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။